XOG CUSUB + UPDATE: KENYA oo ku fashilantay ololihii qaraarka 1267, & Soomaaliya oo guul weyn gaartay! | HalQaran.com
XOG CUSUB + UPDATE: KENYA oo ku fashilantay ololihii qaraarka 1267, & Soomaaliya oo guul weyn gaartay!
Nairobi (Halqaran.com) – War ka soo baxay xarunta Qaramada Midoobay ee New York ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay si rasmi ah ugu fashilantay ololihii ay ka wadday halkaas ee ku aaddana qaraarka 1267 ee lagu beegsanayey Soomaaliya.
Sida uu xaqiijiyey danjiraha Soomaaliya ee QM Abuukar Daahir Cusmaan, in Al-Shabaab lagu daro qaraarkan ayaa waxaa diiday lix ka mid ah 15-ka dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka, oo laba ka mid ah ay yihiin xubnaha joogtada ah. Dalalka diiday ayaa kala ah: USA, France, Belgium, Germany, Poland iyo Kuwait.
Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa horey u saarnaa cunaqabateyn lagu saaray qaraar kale oo lagu magacaabo 751 oo lagu daray 2007, taasi oo caddeyn u ah inaysan marnaba daacad ka ahayn beegsiga Shabaab, ee ay ku jirtay dagaal kale.
Sidoo kale, Kenya haddii qaraarkan lagu dari lahaa Al-Shabaab uga faa’iideysan lahayd in shirkadaha xawaaladaha Soomaalida ku beegsato, haddii ay lacago gaarsiiyaan shacabka ku nool deegaanada ay maamulaan Al-Shabaab.
Waa guul darro weyn oo taariikhi ah oo u soo hooyatay Kenya, iyo guul diblomaasiyeed kale oo ay Soomaaliya xaqiijisay, ugana adkaatay gardarrada iyo daan-daansiga Kenya.
KENYA oo ku fashilantay ololihii qaraarka
Soomaaliya oo guul weyn gaartay!